बिना अनुमती सडक खण्डमा क्रसर उद्योग सञ्चालन - Hamrokhotang
खोटाङका जनप्रतिनिधिलाई एकै किसिमको लोगो र पोशाक
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउपालिकामा बैंक पुग्यो
सम्झनामा दिलकाजी (फोटो फिचर)
बोल्न नसक्ने युवतीलाई करणी गरेको आरोपमा युवा पक्राउ
घरमा आगलागी हुंदा २५ लाखको क्षति
Home » News » बिना अनुमती सडक खण्डमा क्रसर उद्योग सञ्चालन
बिना अनुमती सडक खण्डमा क्रसर उद्योग सञ्चालन
By: HamroKhotang.com on Monday, April 04, 2016 /
खोटाङ, २२ चैत । मध्यपहाडि लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडक खण्डमा बिना अनुमती क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा कालोपत्रेको काम थालिएको सडक खण्डमा पर्ने मुडे, नाँगी र कदुवामा बिना अनुमती क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको हो ।
सडक कालोपत्रेका लागि अस्थायी रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रामबहादुर तामाङले बताउनुभयो । “हामीले स्थायी रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका हैनौं ।” उहाँले भन्नुभयो, “अस्थायी रुपमा सञ्चालन गरिएकाले कसैलाई जानकारी गराएका छैनौं ।”
क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि हालसम्म आधिकारिक जानकारी नआएको जिल्ला विकास समिति खोटाङका स्थानीय विकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “जुनसुकै ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय प्रशासनको अनुमती लिनुपर्ने हुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “दिक्तेल–हलेसी सडक खण्डमा बिना अनुमती उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएकाले कारबाहीका लागि प्रशासनलाई पत्र लेखेको छु ।”
सडक खण्डमा सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योगबारे छानविन र कारबाहीका लागि ठेकेदार कम्पनीका व्यक्तिलाई प्रहरीमार्फत प्रशासनमा झिकाइएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश कुमालले बताउनुभयो । “क्रसर उद्योग सञ्चालनबारे छानविनगरि कारबाहीको गर्न जिविसले प्रशासनलाई लेखेको पत्र कार्यालयमा आइपुगेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “पत्र आउनासाथ प्रहरीमार्फत ठेकेदार कम्पनीका व्यक्तिलाई झिकाएको छु ।”
दिक्तेल–हलेसी सडक खण्ड कालोपत्रेको काम तीन वर्षभित्र सक्नेगरी लामा नागार्जुन र लामा नागार्जुन त्रिसुलीले सुरु गरेको हो । हलेसीदेखि बिजुलेसम्मको १२ किलोमिटर सुर्यदेवि कन्काई तथा बिजुलेदेखि दिक्तेलसम्मको २४ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने जिम्मा नागार्जुन र लामा नागार्जुन त्रिसुलीले लिएको छ ।
राजधानी काठमाडौं तथा तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रेको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । दुई वर्षअघिदेखि कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको सडक अहिलेसम्म फराकिलो पार्ने र ठाउँठाउँमा पर्खाल हाल्ने बाहेक केही भएको छैन ।
राष्ट्रिय महत्व बोकेको मध्यपहाडि लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल–हलेसी सडक ठेकेदार कम्पनीको लापर्वाहीले कालोपत्रे गर्ने काममा ढिलाइ भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र लयालुले बताउनुभयो । “हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण जिल्लावासीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “यसप्रति सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।”
वि.सं. २०६४ सालबाट सञ्चालनमा ल्याइएको दिक्तेल–हलेसी सडक खण्डमा यस वर्ष वर्षायाममा यातायातका सवारी साधन नचल्ने यातायात व्यवसायी सङ्घ खोटाङका सचिव रामकुमार हिङमाङले दाबी गर्नुभयो । “पानी परेको अवस्थामा अहिले नै गाडी गुडाउन खतरा छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “कालोपत्रे गर्न फराकिलो पार्न ठकेदारले पाखाको माटो सडकमा झारिदिएकाले वर्षायाममा गाडी नचल्ने निश्चित छ ।”
करिब ७५ करोडको लागतमा साँढे पाँच मिटर चौँडाई भागमा कालोपत्रे गरिने दिक्तेल– हलेसी सडक आवश्यक सामाग्री जिल्ला भित्र्याउन नपाउँदा भनेजती काम हुन नसकेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । समयमा सडक कालोपत्रे नहुँदा जिल्लावासीले कष्टप्रद ढङ्गले यात्रा गर्नुपर्ने तथा नियमित यातायात सञ्चालन नहुँदा महङ्गीको मार खेप्नुपर्ने बाध्यता छ ।
हेलो मिडिया प्रा.लिद्धारा नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग (द.प्र.न. २११/२०७३–७४) र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट अाधिकारिक रूपमा दर्तासहित सञ्चालित डिजिटल पत्रिका।